Online ပျေါကနေ Account Transfer လုပျနကွေတာ က risk အရမျးမြားပါတယျ – XB Media Myanmar
Online ပျေါကနေ Account Transfer လုပျနကွေတာ က risk အရမျးမြားပါတယျ
ညီမက ဘဏျဝနျထမျးပါရှငျ့ တဈခုလောကျ သတိပေးခငျြလို့ပါ။ အခုကာလမှာ လူတိုငျးက ငှထေုတျဖို့ ခကျခဲနကွေတော့ %နဲ့ငှလေဲတာတှေ Bank Account to Bank Account Transfer တှေ လုပျနကွေတာရှိပါတယျ။
ညီမကိုယျတိုငျလညျး ဒီ gp ထဲက အမတဈယောကျဆီကနေ AYA Account ကနေ ငှသေားထုတျဖူးပါတယျ….။ မကျြနာခငျြးဆိုငျထိုငျပွီး E-Money နဲ့ Physical Cash ကို ဒဲ့လဲတာက အန်တရာယျ မရှိပမေယျ့လေ … Online ပျေါကနေ Account Transfer လုပျနကွေတာက risk အရမျးမြားပါတယျ…..။
ပုံမှနျကာလမှာဆိုရငျ လိမျလညျတဲ့ case တှကေ ရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့၊ ရဲက ရာဇဝတျကွောငျးအရ သကျဆိုငျရာ ဘဏျအကောငျ့ကို suspended လုပျပေးဖို့ ရဲစာရလာရငျ ဘဏျကအကောငျ့ကို တားထားပေးနိုငျပမေယျ့ ဒီကာလကွီးမှာ ရဲစခနျးသှားဖို့ကလညျး ခကျခဲတော့ လေ အလှယျတကူ အလိမျခံရမှာဆိုးလို့ပါ…,။ ဒီနထေဲ့မှာပဲ အလိမျခံရတဲ့ case တှေ ၃ခုလောကျ တှနေ့လေို့ နောကျဆို ပိုမြားလာမှာဆိုးလို့ သတိပေးခငြိလို့ပါ….။
Bank Account Transfer ကိုလေ လူခငျြးတှနေို့ငျတဲ့ face to face အခြိနျမြိုးမှသာ လုပျကွပါနျော..။အလှယျတကူ online ပျေါကနေ စိတျ လောပွီး မလုပျကွပါနဲ့လို့ …။ ဘဏျအနနေဲ့ဆိုရငျလညျး လိမျတဲ့သူရော အလိမျခံရတဲ့ သူရောက နှဈဘကျစလုံး customer ပဲမလို့ တဈ ဖကျရဲ့စကားနဲ့တငျတဈခွားတဈဖကျရဲ့ အကောငျ့ကို ခဏ frozen ထားဖို့က Bank Rules တှအေရ လုပျပေးလို့မရပါဘူး။ ရဲစခနျး ရဲ့ noticed စာ လိုပါတယျ။
စိတျပူလို့ပွောတာမလို့ အနှောကျအယှကျဖွဈသှားရငျ အားနာပါတယျနျော….။
ညီမက ဘဏ်ဝန်ထမ်းပါရှင့် တစ်ခုလောက် သတိပေးချင်လို့ပါ။ အခုကာလမှာ လူတိုင်းက ငွေထုတ်ဖို့ ခက်ခဲနေကြတော့ %နဲ့ငွေလဲတာတွေ Bank Account to Bank Account Transfer တွေ လုပ်နေကြတာရှိပါတယ်။
ညီမကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ gp ထဲက အမတစ်ယောက်ဆီကနေ AYA Account ကနေ ငွေသားထုတ်ဖူးပါတယ်….။ မျက်နာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး E-Money နဲ့ Physical Cash ကို ဒဲ့လဲတာက အန္တရာယ် မရှိပေမယ့်လေ … Online ပေါ်ကနေ Account Transfer လုပ်နေ ကြတာက risk အရမ်းများပါတယ်…..။
ပုံမှန်ကာလမှာဆိုရင် လိမ်လည်တဲ့ case တွေက ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်၊ ရဲက ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်အကောင့်ကို suspended လုပ်ပေးဖို့ ရဲစာရလာရင် ဘဏ်ကအကောင့်ကို တားထားပေးနိုင်ပေမယ့် ဒီကာလကြီးမှာ ရဲစခန်းသွားဖို့ ကလည်း ခက်ခဲတော့ လေ အလွယ်တကူ အလိမ်ခံရမှာဆိုးလို့ပါ…,။ ဒီနေ့ထဲမှာပဲ အလိမ်ခံရတဲ့ case တွေ ၃ခုလောက် တွေ့နေ လို့ နောက်ဆို ပိုများလာမှာဆိုးလို့ သတိပေးချငိလို့ပါ….။
Bank Account Transfer ကိုလေ လူချင်းတွေ့နိုင်တဲ့ face to face အချိန်မျိုးမှသာ လုပ်ကြပါနော်..။အလွယ်တကူ online ပေါ်ကနေ စိတ် လောပြီး မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ …။ ဘဏ်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း လိမ်တဲ့သူရော အလိမ်ခံရတဲ့ သူရောက နှစ်ဘက်စလုံး customer ပဲမလို့ တစ် ဖက်ရဲ့စကားနဲ့တင်တစ်ခြားတစ်ဖက်ရဲ့ အကောင့်ကို ခဏ frozen ထားဖို့က Bank Rules တွေအရ လု ပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ ရဲစခန်း ရဲ့ noticed စာ လိုပါတယ်။
စိတ်ပူလို့ပြောတာမလို့ အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် အားနာပါတယ်နော်….။
“အနုပညာ မောငျနှမတှေ ဖမျးဆီးခံနရေတာကို ခံပွငျး တယျ”လို့ ခမျြးခမျြး ဆို
သငျ့အ သကျဘယျလောကျလဲ? ဘာနမှေ့ေးလဲ? သာမှနျ မှနျပွောပါ